London ka hatrany Seychelles tsy mijanona amin'ny British Airways: Andro lehibe ho an'ny fizahan-tany Seychelles
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » London ka hatrany Seychelles tsy mijanona amin'ny British Airways: Andro lehibe ho an'ny fizahan-tany Seychelles
Ny sidina British Airways (BA) voalohany tao anatin'ny 14 taona dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles ny alahady teo.
Ny Boeing 787-9 Dreamliner dia nidona tamin'ny 6.10 maraina niaraka tamin'ny mpandeha 214 tao anaty sambo.
Ny minisitry ny fizahan-tany, sidina sivily, seranan-tsambo sy ranomasina, Maurice Loustau-Lalanne, ny kaomisera ambony any Seychelles, Caron Röhsler, sekretera lehiben'ny fizahan-tany, Anne Lafortune, sekretera foiben'ny fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy ranomasina, Garry Albert, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Birao fizahan-tany any Seychelles, Sherin Francis, & Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily Seychelles Gilbert Faure, dia isan'ireo vahiny nanatrika ny seranam-piaramanidina.
Ankoatr'ireo mpandeha maherin'ny 200, ny sidina voalohany dia nitondra ny filoha lefitra misahana ny varotra ihany koa, Richard Tams, ary koa ny mpanao gazety avy amin'ny gazety anglisy malaza: The Times LUXX, Sunday Times Travel Magazine, Town and Country Magazine, The Masoandro, ny fitaratra isan'andro ary ny isan'andro Express.
Ny minisitra Loustau-Lalanne dia namaritra ny fiverenan'ny làlamby britanika any Seychelles ho toy ny andro mahafinaritra, satria maro ny olona no nanonofy ny fiverenan'ilay vorona haingam-pandeha mena ho any amoron-tsika.
“Ny fiverenan'i BA taorian'ny 14 taona tsy nahajanona azy dia fampandrosoana lehibe tokoa. Manamafy ny fahatokisanao sy ny fahatokisanao ny indostrian'ny fizahantany eto amintsika. Io no vaovao tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny fizahantany Seychelles na amin'ny fotoana maharitra na amin'ny fotoana maharitra, "hoy ny minisitra.
Ny tantaran'ny British Airways tany Seychelles dia nanomboka tamin'ny 1971 rehefa nidina ny sidina BOAC voalohany niaraka tamin'ny mpandeha 110 tao anaty sambo. Tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy nijanona tao Nairobi ny sidina alohan'ny nahatongavany tany Seychelles. Ny BA, izay nijanona tsy nanidina tany amin'ny nosy tamin'ny volana Jona 2004, dia niverina niaraka tamin'ny sidina mivantana tsy an-kijanona.
Ny zotram-piaramanidina an'ny International Airlines Group (IAG), dia hanolotra sidina indroa isan-kerinandro mankany Seychelles miala ny Terminal London Heathrow's Terminal 5. Nanamarika ny minisitra Loustau-Lalanne fa ny serivisy tsy miato avy amin'ny Heathrow Terminal 5 dia hanome vahana ireo tsena vao misondrotra ihany koa. izany hoe Kanada sy Etazonia.
Ho azy, ny filoha lefitry ny varotra BA, Richard Tams, dia nampiasa ny lahateniny mba hanambarana fa raha tokony hanambara sidina fizaran-taona teo aloha, dia hanolotra serivisy manerantany ho an'i Seychelles izao ny zotram-piaramanidina. Nanambara izy ny fahatokisan'ny BA fa ny seranam-piaramanidina dia hanana fifandraisana maharitra sy mandroso miaraka amin'i Seychelles satria manomboka amin'ny dia mahafinaritra mitondra ny mpamorona fialantsasatra ho any amin'ity toerana fialantsasatra tonga lafatra ity.
"Efa hitantsika fa ny fizahan-tany any Seychelles dia nitombo 15 isan-jato tamin'ny taon-dasa, ka azonay antoka fa ity làlana mivantana vaovao manelanelana an'i Seychelles sy UK ity dia ho hita fa fahombiazana lehibe," hoy Andriamatoa Tams.
Rehefa nandray ny British Airways izy, dia nilaza ny kaomisera avo anglisy, Caron Rohsler, fa noho ny fahatsiarovany ny fiantraikan'ny mpizahatany amin'ny tontolo iainana any amin'ny toerana itodian'ny nosy, ny governemanta UK dia hanampy torohevitra vaovao momba ny fizahan-tany maharitra amin'ny pejin-tranonkala.
"Anisan'izany ny torohevitra momba ny fomba ahafahan'ny mpitsidika manampy amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny fonenan'ny nosy mba hahafahan'ny taranaka ho avy mankafy azy ireo," hoy izy.
Tamin'ny taona 2017, nandefa mpitsidika 21,991 6 tany Seychelles ny UK & Irlandy Avaratra. Amin'izao fotoana izao ny XNUMXth tsena mitarika, ny UK & Irlandy dia nandefa 3,608 ho an'ny firenena nosy hatreto tamin'ny taona 2018. Ny minisitra Loustau-Lalanne dia nanamarika fa ny fiverenan'i BA dia nahatonga ny mpitsidika 25,000 ho tratrarina.
Ny fihetseham-po dia nizara ny Lehiben'ny Executive an'ny Seychelles Tourism Board, Sherin Francis, izay nandray ihany koa ny vaovao fa hanolotra serivisy mandritra ny taona ho an'i Seychelles i BA.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny biraon'ny STB any Angletera dia efa miara-miasa amin'ny British Airways mba hamolavola paikady ara-barotra ao anatin'ny fifanarahana roa taona hivarotana sy hampiroborobo an'i Seychelles ho toeran-kaleha ary hanohanana ny British Airways tsy mijanona, indroa- sidina isan-kerinandro mankany amin'ny toerana itodiana. Ny fifanarahana dia vita sonia taoriana kelin'ny nanambaran'ny BA ny fiverenany any Seychelles.
“Tsena iray taona no tsenan'i UK, ary tsy tokony hohadinointsika koa fa manana diaspora Seychellois monina any UK izahay izay mandeha mandritra ny taona indrindra indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina sy ny fetin'ny Noely. Eo an-toerana, ny mponina Seychellois dia mandeha tsara ihany koa ary miaraka amin'ny rohy manan-tantara miaraka amin'ny UK dia mety hisy dia lavitra avy any Seychelles. Vaovao mahafaly ihany koa fa serivisy mandritra ny taona ity ary matoky aho fa hahomby ny sidina », hoy Rtoa Francis.
Ankoatry ny manampahefana misahana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany fizahan-tany dia misy vondron'olona iray hafa tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina hijerena ny fiverenan'i BA any Seychelles dia vondrona misy mpiasa Seychellois enina teo aloha izay niasa nandritra ny taona maro ho an'ny British Airways, talohan'ny nijanonan'ny sidina tamin'ny 2004.
Fotoana ara-tantara sy ara-pihetseham-po ho an'i Doris Johnston, Rosemarie Hoareau, Celine Rahemtulla, Georges Michel, Noellie Alexander ary Vicky Lanza.
Noellie Alexander no olona voalohany niditra tao amin'ny British Airways tamin'ny 1971, nijanona ho mpiasa nandritra ny 10 taona izy. Niasa tao amin'ny biraon'ny tanàna izy fa ny ampahany amin'ny andraikiny dia ny manatrika ny seranam-piaramanidina aminy amin'ny andro hahatongavan'ny sidina ao Seychelles. Tsaroany izany tamin'io fotoana io; Tombontsoa iray ny naha-mpiasan'ny British Airways azy.
Vicky Lanza dia niditra tao amin'ny British Overseas Airways Corporation (BOAC) tamin'izany fotoana izany enim-bolana taorian'ny nahatongavany voalohany, tamin'ny voalohan'ny taona 1972, naharitra 35 taona niaraka tamin'ny orinasa. Nanomboka tamin'ny naha sekretera azy dia niakatra tamin'ny tohatra izy noho ny fotoana fampiofanana sy ny fiezahany manokana. Andriamatoa Lanza dia lasa mpitantana ny Seychelles tamin'ny 1988 ary 10 taona taty aoriana; nafindra tany amin'ny biraon'ny British Airways any Maurice izy, toerana niasan'ny mpitantana ny ranomasimbe Indianina, tompon'andraikitra amin'ny Mauritius, Seychelles, Reunion ary Madagascar.
“Rehefa tonga tany am-piandohana ny British Airways dia nanangona vola tao Seychelles izy ireo. Nanomboka tamin'ny mpiasa 2 izahay ary nitombo ny fananana mpiasa 22, ny mponina rehetra. Ny British Airways dia tsy nitsahatra nanome fiofanana ho anay, ary ny fenitry ny serivisy izay tratra dia noho io fiofanana io. Manana fenitra avo lenta toy izany izahay, ary tena zava-dehibe izany, ”hoy izy.
Ny sidina vaovao indroa isan-kerinandro ataon'ny British Airways mankany Seychelles dia hiala ao amin'ny Terminal 5 any London Heathrow ny alarobia sy asabotsy ary hiverina ny alakamisy sy alahady.
Ankoatry ny fahombiazan'ny solika, ny Boeing 787-9 Dreamliner izay ampiasaina amin'ny zotra Seychelles dia manolotra vokatra kabine misy kilasy 4 ho an'ny mpanjifa: Voalohany, Club World, World Traveler Plus ary World Traveler.